Amụma nzuzo - Wikipedikia Encyclopedia?
Emelitere ikpeazụ: Machị 07, 2021
Okwu nke edeputara leta mbu ya nwere nke putara n'okpuru onodu ndia. Nkọwa ndị a ga-enwe otu ihe agbanyeghị na ha pụtara na otu ma ọ bụ na ọtụtụ.
Company (nke a na-akpọ ma "Companylọ ọrụ ahụ", "Anyị", "Anyị" ma ọ bụ "Anyị" na nkwekọrịta a) na-ezo aka DIW Ltd, 1744 Broadway, New York, NY 10019, United States.
Country na-ezo aka: New York, United States
Weebụsaịtị na-ezo aka Wikipedikia, enwere ike ịnweta site na https://wikipedikia.org/
Anyị na-eji Kuki na teknụzụ nsuso ndị yiri ya iji soro ihe omume na Ọrụ Anyị ma chekwaa ụfọdụ ozi. Teknụzụ nyocha ejiri na mgbama, mkpado, na edemede iji kpokọta ma soro ozi yana iji melite ma nyochaa Ọrụ anyị. Teknụzụ ndị anyị na-eji nwere ike ịgụnye:
Kuki ma ọ bụ Kuki Nchọgharị. Kuki bụ obere faịlụ etinye na Ngwaọrụ gị. Nwere ike ịkụziri ihe nchọgharị gị ịjụ Kuki niile ma ọ bụ gosi mgbe a na-eziga kuki. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnabataghị kuki, ị gaghị enwe ike iji ụfọdụ akụkụ nke Ọrụ anyị. Ọ gwụla ma ị gbanwee usoro ihe nchọgharị gị ka ọ wee jụ Kuki, Ọrụ anyị nwere ike iji Kuki.
Kuki Flash. Featuresfọdụ atụmatụ nke Ọrụ anyị nwere ike iji ihe echekwara (ma ọ bụ Kuki Flash) iji kpokọta ma chekwaa ozi gbasara mmasị gị ma ọ bụ Ọrụ gị na Ọrụ anyị. Anaghị ejikwa otu ntọala ihe nchọgharị ahụ ejiri kuki Flash dị ka ndị ejiri ya na Kuki Nchọgharị. Maka ozi ndị ọzọ gbasara otu You ga-esi hichapụ Kuki Flash, biko gụọ “Ebee ka m nwere ike ịgbanwe ntọala maka ịgbachi, ma ọ bụ ihichapụ ihe ndị ekekọrịtara na mpaghara?” dị na https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
Mgbama Weebụ. Akụkụ ụfọdụ nke Ọrụ anyị na ozi ịntanetị anyị nwere ike ịnwe obere faịlụ elektrọnik nke amaara dị ka mgbama weebụ (nke a na-akpọkwa gifs doro anya, ihe mkpado pixel, na gifs otu-pixel) nke na-enye ụlọ ọrụ ahụ ohere, dịka ọmụmaatụ, ịgụta ndị ọrụ gara na ibe ndị ahụ. ma ọ bụ mepee ozi-e na ihe ndekọ weebụ ndị ọzọ metụtara ya (dịka ọmụmaatụ, ịdekọ ewu ewu nke ngalaba ụfọdụ na nyochaa usoro na iguzosi ike n'ezi ihe nkesa).
Kuki nwere ike ịbụ '' Nkwado '' ma ọ bụ 'Oge' Kuki. Kuki na-adịgide adịgide na-adịgide na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka gị mgbe go na-apụghị n'ịntanetị, ebe a na-ehichapụ Kuki Oge Oge ozugbo ị mechiri ihe nchọgharị weebụ gị.
Anyị na-eji Oge Oge na Kuki Na-adịgide Adịgide maka ebumnuche ndị edepụtara n'okpuru:
Kuki dị mkpa / dị mkpa
:Dị: Kuki nke Oge
Edemede nke: Anyị
Ebumnuche: Kuki ndị a dị mkpa iji nye gị ọrụ dị na weebụsaịtị ma mee ka I jiri ụfọdụ atụmatụ ya. Ha na-enyere aka mee ka ndị ọrụ nyochaa na gbochie iji akaụntụ ndị ọrụ. Enweghị kuki ndị a, agaghị enye ọrụ ndị ị rịọrọ maka ya, anyị na-ejikwa kuki ndị a iji nye gị ọrụ ndị ahụ.
Nri kuki / Mara ọkwa Cookies
:Dị: Kuki na-adịgide adịgide
Ebumnuche: Kuki ndị a na-achọpụta ma ọ bụrụ na ndị ọrụ anabatala ojiji kuki na weebụsaịtị.
Ebumnuche: Kuki ndị a na-enye anyị ohere icheta nhọrọ ị na-eme mgbe ị na-eji weebụsaịtị, dị ka icheta nkọwa nbanye gị ma ọ bụ mmasị asụsụ. Ebumnuche nke Kuki ndị a bụ iji nye gị ahụmịhe nke onwe gị karịa ma zere having ga-abanye na ntinye gị oge ọ bụla ị na-eji weebụsaịtị.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara kuki anyị na-eji na nhọrọ gị banyere kuki, biko gaa na Iwu Kuki anyị ma ọ bụ ngalaba kuki nke amụma anyị.
Maka inyefe azụmahịa: Anyị nwere ike iji ozi gị iji nyochaa ma ọ bụ mee mmakọ, ịpụgharị, nhazigharị, ịhazigharị, mgbasa, ma ọ bụ ọrịre ọzọ ma ọ bụ nyefee ụfọdụ ma ọ bụ akụ anyị niile, ma ọ bụ dị ka ihe na-aga n'ihu ma ọ bụ dịka akụkụ nke enweghị ego, mmezi mmiri, ma ọ bụ usoro yiri ya, nke Data nkeonwe anyị nwere banyere ndị ọrụ Ọrụ anyị so na akụ ndị ebufere.
Maka nzube ndị ọzọ: Anyị nwere ike iji ozi gị maka ebumnuche ndị ọzọ, dị ka nyocha data, ịmata usoro ojiji, ịchọpụta arụmọrụ nke mkpọsa nkwado anyị na ịtụle ma melite Ọrụ, ngwaahịa, ọrụ, ahịa na ahụmịhe gị.
Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi nkeonwe gị n'ọnọdụ ndị a:
Na ndị na-enye ọrụ: Anyị nwere ike ịkesa ndị na-eweta ọrụ ozi gbasara gị iji nyochaa ma nyochaa iji ọrụ anyị, iji kpọtụrụ gị.
Maka inyefe azụmahịa: Anyị nwere ike ịkekọrịta ma ọ bụ bufee ozi nkeonwe gị na njikọ, ma ọ bụ n'oge mkparịta ụka nke, mmakọ ọ bụla, ọrịre nke akụ ụlọ ọrụ, ịkwụ ụgwọ, ma ọ bụ inweta ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke azụmahịa anyị na ụlọ ọrụ ọzọ.
Mụ na ndị ọrụ ndị ọzọ: mgbe ị na-ekerịta ozi gbasara gị ma ọ bụ na-eso ndị ọrụ ndị ọzọ na-emekọrịta ọhaneze, ndị ọrụ niile nwere ike ịlele ụdị ozi a, enwere ike kesaa ya n'ihu ọha. Ọ bụrụ na I soro ndị ọrụ ndị ọzọ na-emekọrịta ihe ma ọ bụ debanye aha ya na Ọrụ Ndị Ọrụ Ọha na-eme nke atọ, ndị kọntaktị gị na Ndị Ọrụ Social Media nke atọ nwere ike ịhụ aha gị, profaịlụ gị, foto gị ma kọwaa ọrụ gị. N'otu aka ahụ, ndị ọrụ ndị ọzọ ga-enwe ike ịlele nkọwa maka ọrụ gị, soro gị kparịta ụka ma lelee profaịlụ gị.
Site na nkwenye gị: Anyị nwere ike igosipụta ozi nkeonwe gị maka nzube ọ bụla ọzọ na nkwenye gị.
Anyị nwere ike imelite Amụma Nzuzo anyị site n'oge ruo n'oge. Anyị ga-agwa gị maka mgbanwe ọ bụla site na ịdebe Iwu Nzuzo ọhụrụ na ibe a.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Iwu Nzuzo a, can nwere ike ịkpọtụrụ anyị:
Site na email: contact@wikipedikia.org
Site na ịga na ibe a na weebụsaịtị anyi: https://wikipedikia.org/contact/